काजोलले रानीलाई फिल्मबाट हटाउन किन दबाब दिईन् ? | Makalukhabar.com
काजोलले रानीलाई फिल्मबाट हटाउन किन दबाब दिईन् ?
साउन २६, भारत । भारतीय फिल्म क्षेत्रमा ९० औं दशकमा बहुचर्चित काजोलले थुप्रै सुपरहिट फिल्ममा काम गरिन् । विशेषगरी उनलाई शाहरुख खानसँग निकै रुचाइयो । शाहरुख र काजोलले साथमा थुप्रै सुपरहिट फिल्म खेले । यो जोडी अझै पनि दर्शकको मन र मस्तिष्कमा बसिरहेको छ ।
विभिन्न विषयमा विभिन्न समयमा उनी विवादित पनि उत्तिकै बनिन् । फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ निकै चर्चामा रह्यो । यो फिल्म मन नपराउने सायदै कोहि होला ।
काजोल, रानी र शाहरुख खानको त्रिकोणात्मक प्रेममा आधारित फिल्मले धेरै दर्शकको मनमा बास बसेको थियो । तर, यही फिल्मबाट रानी र काजोलबीच शीत युद्ध शुरु भयो । उक्त फिल्मका लागि काजोलसँगै रानीलाई लिइयो । तर, काजोलले रानीलाई फिल्मबाट हटाउन करन जोहरलाई दबाब दिइन् । तर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर आदित्य चोपडाले रानीलाई हटाएनन् । यसपछि रानी र काजोलको दुश्मनी पक्का भयो । एजेन्सी
चीनमा लेकिमा आँधीः २८ जनाको मृत्यु, दश लाख विस्थापित
आलियाले लगाएकी यस ड्रेसको मूल्य सोच्नै नसकिने
मंसिर २२, भारत । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट यतिखेर महङ्गो ड्रेसका कारण निकै चर्चामा छिन् । उनको फेशनले धेरैको ध्यान खिचिरहेको हुन्छ । हालै उनी ‘वी द वीमेन’ को एक कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा आलियाले सेतो रङको मिनि ब्लेजर लगाएकी थिइन् । उक्त ड्रेसले धेरैको ध्यान खिचिरहेको छ । उनले... जारी राख्नुहोस...
बलिउड नायक नवाजुद्दीन सिद्दीकीकी बहिनीकाे मृत्यु
मंसिर २२, भारत । बलिउड नायक नवाजुद्दीन सिद्दीकीकी बहिनी सायमा तमशी सिद्दीकीको निधन भएको छ । पुणे, महाराष्ट्रको एक अस्पतालमा शनिबार सबेरै करिब ३ बजे उनले अन्तिम सास फेरेकी हुन् ।उनी २६ वर्षकी थिइन् र पछिल्लो ८ वर्षदेखि स्तन क्यान्सरबाट आक्रान्त थिइन् । नवाजका भाइ अयाजुद्दीन सिद्दीकीले यसबारे जानकारी... जारी राख्नुहोस...